Afka dhexe iyo aagga dhexe – Kaasho Maanka
Baxaalliga ama abuuraha afafka waxaa ka mid ah in luqad kasta oo geyi isku xiran lagaga hadlo ay afguriyadeeda ugu faseexsanaato lahjadda bartamaha dhulkaas lagaga hadlo, sababtuna waa ay caddahay oo dadka dhexda joogaa waxa ay ku xiran yihiin kuwa dhinacyada ka xiga oo dhan, laakiin kuwa darafyada degaa iyaga uun baa iska warhaya. Soomaalida haddii aynu tusaale u soo qaadanno gobollada dhexe waxa ay ku xiran yihiin soomaali galbeed, woqooyi, bari iyo koofur oo mid kasta ay dhinaca ku hayaan, waxa ayna ku hadlaan lahjad ka faseexsan kuwa kale oo dhan oo laga fahmi og yahay kuwa geesaha xiga.
Markii far soomaalida la qoray waxaa la qabtay doodo ku saabsan lahjadda ku habboon in qoraallada iyo warbaahinta loo adeegsado, waxaana markiiba soo baxday in lahjadda gobollada dhexe ay kuwa kale kaga habboon tahay in buugaagta iyo saxaafadda loo isticmaalo. Faseexnimada keli ah ma aha ee gobollada dhexe iyo soomaali galbeed waxaa ku yar in erey qalaad lagu daro soomaaliga sida carabi, ingiriis iyo talyaanni oo waa lahjad ay ereyadeedu ka kooban yihiin af soomaali barax la’.
Warbaahinta iyo qoraallada keli ah in lahjadda dhexe loo adeegsado ma aha ee waxaa habboon dadka madaxda noqonaya laftoodu in ay bartaan oo isku taxallujiyaan afka dhexe, waayo qofka madaxda ah hadalkiisu warbaahinta ayuu galaa. Kolley qof weyni lahjaddiisa in uu beddelo waa ay adag tahay, laakiin tabobarku waa uu iska fiican yahay, in af qurux badan lagu hadlaana darajada qofka ayey kor u qaaddaa.
Markii arrintan sidaas looga hadlo waxaa laga yaabaa in ay dadka qaarkood moodaan in lahjaddooda la caayey oo mid kale la ammaanay, laakiin ujeeddadu sidaas ma aha ee waxa aynu u dan leennahay in la helo af soomaali faseex ah oo si qeexan loo wada fahmo iyo in mustaqbalka ay afguriyadu isu soo dhowaadaan oo ay mid keli ah noqdaan. Soomaalidu waxyaalo badan oo aan muran gelin bay dood ka furaan, laakiin arrintan dacwi badani ka ma unkami karo oo waa arrin dunida oo dhan isku nooc uga jirta, wax dhibaato ahna ma leh in afkeenna sida ugu fiican loogu hadlo.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 28th November 2019